Rita, Writing for My Sake!: ဝဋ်ကြွေး၊ သံသရာ နှင့် အမေး အဖြေ
Posted by Rita at 10/18/2009 02:38:00 PM
Thanks for your answer and post. :)
I am satisfy with your answer to some extents.
ကံ ကံ၏အကျိုးဆိုတာကို အနက်သိရင် သံသရာဆိုတာကို နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ အကြံပြုချင်တယ်။ http://www.lknt11.com/2009/07/blog-post_8973.html အဲဒီပိုစ့်မှာ ဆရာတော်ရေးထားတာလေး ကောင်းတယ်။
ကျုပ်တုိ့ တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အားနည်းချက်ဟာ တကယ်မလေ့လာသေးပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ မှတ်ပုံတင်ထဲ စာရင်းသွင်းထားတာ သိပ်ဆိုးတယ်။ (ကျုပ်အပါအ၀င်ပေါ့။) ဒီပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးပဲ။
ပိုစ်ပြန်တင်တဲ့အတွက် မှတ်မှတ်သား သား မှတ်သားထားတယ်ဗျာ...